Guddoomiye ku smart: Guide Buyer A ee - Rule News
Waxay samayn karaan wax walba oo ka ciyaaro Gurtida aad jeceshahay in jeestay nalalka. Laakiin taas waa in aad hesho? Waana imtixaanaynaa afarta daydo hoggaamineed
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “ku hadla smart: Hagaha iibsadaha ah ee” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo Observer The on Sunday 25 February 2018 09.30 UTC
Price: £ 89,99labaad ee jiilka Amazon ee Echo waa version ah uggu qalab in la Abuurtay category oo dhan ku hadla smart in 2014. Echo cusub waa yar, si fiican uga dhawaajiyeen oo ka wanaagsan raadinaya, in doorasho dhar ama qoryo dhamaado.
Maxaa ka dhigay weyn Echo waa kaaliyaha dalwaddii Amazon ee, Alexa. giraanta A toddoba mikroofanada ay ku top ah wuu maqlaa soo baxay ah doorashadaada erayga dib - default ka fudud yahay "Alexa" - ka hor inta diraya waxa aad sheegayso in server Amazon ee fasiraadda. Alexa had iyo jeer maqli karo waxaad ka mid yihiin in ka badan buuq music sida cod weyn sida marwaxadda hawada ah oo ka quruxsan fog.
Alexa ayaa taageero multi-user, ka jawaabi kara su'aalo badan oo ilaa xad, waa fiican at turjubaan aad sheegeysid iyo aad ayaa lagu ogaaaday oo talanti iyo xirfadaha dhinac saddexaad dhisay-in lagu rakibaa kartaa galay, taas oo inta badan fekrado ku xigeenka cod la heli karo. Waxaa si gaar ah uga fiican at gacanta guriga smart oo loo maqli music, kontoroolka cod buuxda Spotify, Amazon Music iyo RaadyahaTuneIn.
Echo cusub ayaa sidoo kale u muuqataa ka khayr badan mid ka mid ah jirka, la Bass dheeraad ah oo la caddeeyo, gaar ahaan Muga sare. Inkasta oo ma ahan sida ugu fiican ee farabadan ee, waxa hubaal ah feedh ku xusan culeyska qiimaha, awoodaan in ay qol la audio 360-degree buuxin ka woofer a 2.5in hal iyo tweeter 0.6in a. Waxaa xitaa uu leeyahay dekedda audio baxay iyo Bluetooth xiriirayo ku hadla iyo Streaming music ama ka Echo ah.
Amazon ee Alexa app waa mid aad u awood, haddii wax yar ka daalid, taas oo kor u dejinta iyo beddelo waxyaabo fudud. Badhamada on top ee mugga, button ficil iyo button carrab waxaa kaabaya giraan ah iftiin ku wareegsan top in aad muujinaysaa waxa Alexa sameynayo iyo meesha Echo u maleeyo in aad la hadlaya oo ka. Codxir mics iyo giraanta glows cas, taas oo waa wax fudud si ay u arkaan ka dhanka qolka.
Verdict: At £ 90, waa adag tahay in garaacday Echo ah, la Alexa waxa qiimaha ugu wanaagsan oo dhan hareeraheeda ku-Gudoomiyaha smart samaynta.
Apple HomePod The: tayada codka cajiib ah. Sawir: Antonio Olmos
Price: £ 319 entry The newest waa Apple ee HomePod iyo, waxaa la, ee iPhone-dajiye waxaa ugu danbeyn ku biiray xisbiga ka badan saddex sano ka dib Echo ugu horeysay ee ka dhacay suuqa. HomePod waa afhayeenka ugu weyn oo ugu qaalisan smart ee kooxda, dhululubo mesh-daboolay ah oo salka ku silicone guri oo dhalaalaya, disc taabto-xasaasi ah on top.
Inkastoo waaweyn, waxa ugu dirreed of farabadan oo waa sida guriga dhexe ee miiska jikada sida ay tahay on mantelpiece ama guugta. Ha loo digay, in kastoo: foot silicone uu ka tagi doono marks cad giraanta on alwaax lagu daweeyey. top waxay leedahay laba badhamada mugga maqan iyo bandhigay multicolour xarun oo muujinaya marka Siri, kaaliyaha cod Apple ee, maqlayaaye inaad. Waxa aan ugu fudud si ay u arkaan ka dhanka qolka iyo inta aad ka xidhi karaa mikroofanada, ma jirto calaamad muujinaysa arki karo in HomePod waxaa mar dambe wax aan dhagaysto.
HomePod The muran yahay Gudoomiyaha ugu dhawaaqaysa in farabadan ay. Waxay leedahay diyaariyeen ah ee toddoba tweeters iyo mid woofer abuuri soundscape ugu ballaaran tahay badan tahay in la helo ka afhayeenka hal aad. Waxaa si toos ah habaysaa si ay ku hareereysan, abuuraya waayo-aragnimo ah immersive arrinta ma halkaas oo uu geeyaa qolka, la Bass qoto dheer, laakiin si adag gacanta iyo kala fiican, waxba micno ah kaa lumo, xataa crescendo ah.
Inkstoo uu u wanaagsan, Apple ee Siri kaliya ma aha ilaa heerka la mid ah sida Kaaliyaha Google ama Amazon ee Alexa. Waxa aad maqli karo iyo sidoo kale ugu wanaagsan ee iyaga ka mid ah, laakiin waxa aad u fahmo waa arrin oo kala duwan. Siri helo waxa aad isku dayaya in ay ku dhawaad ​​odhan 70% waqtiga, kaas oo noqon kara mid aad u niyad-jab, halka ay awoodda in ay ka jawaabaan su'aalaha iyo qabashada hawlaha kaliya ma aha sida wanaagsan. Ma jirto taageero account multi-user, labada, taas oo macnaheedu yahay waa ka yar fududahay si aad u hesho on leh ee guriga qoyska.
HomePod ayaa sidoo kale kaliya taageeraa Apple Music ama iTunes Match, taasoo la micno ah ma Spotify hooyo ama xitaa radio ka baxsan Beats 1. Music loo diri karo via AirPlay ka qalab macruufka ah, Mac ama iTunes on PC a, laakiin qalabka Android maqan yihiin oo ma jirto Bluetooth ama line-in taageero. Waxaa kaloo loo baahan A qalab casri ah oo macruufka ah oo hagaajiya HomePod ah, waxay la micno ah ayaa loogu talagalay oo dhan-Apple dadka isticmaala oo kaliya.
Verdict: Waxay arrintu u muuqataa weyn, laakiin Siri, xirnaanta iyo taageero adeega music waa hab ka danbeeya tartanka.
Home Google: 'Kaaliyaha in ay ka shaqeeyaan waxa aad isku dayaya in ay weydiiso awood u yeelan doonaan, halkaas oo dadka kale ku guuldareystaan. ' Sawir: Antonio Olmos
Price: £ 129 Gudoomiyaha smart Google ee Home yar a, qalab chubbier ka badan inta badan kuwa kale. Halkii isagoo dhululubo ah sida Echo ama HomePod ah, Home ku eg dheri leh caddaan ah, jilicsan-taabashada, top caag ah oo cad oo saldhig dhar (qarinaya laba hiitarka dadban hal Guddoomiyaha iyo).
oo dhan ee guddiga sare waa taabashada-xasaasi ah. Taabo xarunta si aad u bilowdo Kaaliyaha Google iyo mari fartaada ku dhaqaaq wareeg ah si ay ula qabsadaan mugga. button A on dhabarka cabudhiyo mikroofanada. Qarsoon dusha sare ay Dureeri Dhexdeeda waa giraan ah ee uu Kokes, oo iftiiminaya in aad wax u socdaan muujiyaan, samaynta naqshadaha cilada markii Kaaliyaha waxaa ka jawaabaya ama shidida ilaa huruud ah marka mics waa la qariyaa.
Google Home leedahay laba mics ee ugu sareysa in awood Kaaliyaha in aad si fiican maqal, ka badan buuqa iyo music ugu, laakiin ma aha arrin iyo sidoo kale Echo ah. Kaaliyaha ayaa set isku mid ah oo ah xirfadaha si Amazon ee Alexa la aqoonsi ugu fiican afka dabiiciga ah la heli karo - haddii aad isku ciyaartid su'aashaada, Kaaliyaha caadiyan noqon doontaa in ay ka shaqeeyaan waxa aad isku dayaya in ay weydiiso awoodi, halkaas oo dadka kale ku guuldareystaan. Waxa kale oo ay leedahay taageero multi-user, garashada codad kala duwan oo sahlaysa in music ka maktabadda ama macluumaad ka heli kalandarka.
Kaaliyaha ayaa database macluumaadka ugu weyn, taas oo ka khayr badan inta kale ee aqoon guud, dib u soo dhacaya in ay web aad u hesho macluumaad dheeraad ah, laakiin apps ay dhinac saddexaad oo ay gacanta guriga smart yar ku Hadhi ka danbeeya Alexa.
dhawaaqa ka soo Home uu yahay halkii ay ka badan si toos badan Echo ah, rasaas baxay hore. Waxay leedahay xaddi weyn ee Bass iyo ka heli kartaa quruxsan cod for afhayeenka yar, laakiin waa yar cad ka badan Echo ah. Waxaa Bluetooth ma ahan ama godka analoogga, laakiin waxa ay natively ciyaari karaa music ka Spotify ama Google Play Music ama heli music via Bluetooth ama Kabka Google.
Verdict: Google Kaaliyaha fahamkiisa iyo helitaanka macluumaadka waa laga qabanin, laakiin Home waa ka qaalisan Echo ah.
Sonos Mid ka mid ah ayaa: Alexa on board iyo ku dhawaad ​​adeegga music kasta oo la heli karo. Sawir: Antonio Olmos
Price: £ 199 Mid ka mid ah Sonos The ballan qaaday in ay noqon Jack oo dhan Xirfado. Sonos qaaday weyn Play:1 Gudoomiyaha guugta, daray top taabashada-xasaasi ah la badhamada waayo, mugga iyo loo maqli karo iyo waxa dalool rito for soo diyaariyeen lix codbaahiyaha in hogaanka. sida oo kale, Mid ka mid ah waa ka guriga guugta ama la mid ah ahayn ee xarunta of miis, sida ay woofer hal iyo tweeter wejiga weeraryahanada halkii codka saadaalineysa in jiho kasta.
Si ka duwan mid ka mid ah ku hadla kale ee group this, Mid ka mid ah uu leeyahay awood u leh in ay taageeraan in ka badan hal kaaliye cod. Haatan, ay timaado la Amazon ee Alexa, laakiin shirkadda ayaa ka shaqaynaysa Kaaliyaha Google isdhexgalka aad.
sidoo Waxa aad maqli karo iyo waxay leedahay laba Kokes in hogaanka. Mid ka mid ah waxay muujinaysaa in mics ku jira iyo dareenka gubashada kale marka Alexa ayaa ka shaqaynaysa. Si ka duwan inta kale, Mid ka mid ah ayaa sidoo kale ka dhigaysa beep marka Alexa maqla erayga dib, taas oo kuu sahlaysa inaad u sheegto ka dhanka qolka in uu dhageysto. Mid ka mid ah wuxuu taageeraa inta badan ka shaqeynayaan Alexa ee, oo ay ku jiraan xirfadaha oo dhan, control guriga smart iyo kaaliyaha muuqaalada, oo lagu daray gacanta cod buuxa ee Spotify, Amazon Music iyo RaadyahaTuneIn, laakiin maqan yeedhayso cod oo loo maqli eBook.
Sidoo kale ka duwan inta kale, Mid ka mid ah si buuxda oo awood u hawlgala sidii Guddoomiyaha a wifi aan Alexa. app Sonos The isku dhow adeegga music kasta oo qorraxda hoosteeda, oo ay ku jiraan Apple Music, galay hal meel laga raadin, ama waxaad isticmaali kartaa Spotify Connect inuu u ciyaaro music. Ma jirto Bluetooth ama analoogga taageero audio, in kastoo. Waxa kale oo aad bedelo qaab karaa dhawaaqa in aad ka jeelahay ee app ah oo aad samaysid waxa Sonos oo ku baaqay in daafigaw Trueplay la isticmaalayo qalab macruufka ah in ay tayadoodii dhawaaqa for qolka.
Mid ka mid ah codadka weyn afhayeenka u gaar ah, laakiin codadka ka sii fiican in labo ka mid ah rikoor, iyo in lala karaa mid ka mid ah ku hadla Sonos ka weyn, waayo, audio qolka multi-.
Verdict: Tani Gudoomiyaha fiican-dhawaaqaysa la Alexa waa Combo adag ku garaacday.
22452	10 Alexa, google guriga, qaadi karo, Gudoomiyaha smart, ku hadla smart
← Apple HomePod Ugu dambeyntii Available Iibsashada Samsung Galaxy S9 + Review →